जापानमा संचिताको ७ तस्बिर, फ्रेममा अटेनन् निखिल ! « Ramailo छ
जापानमा संचिताको ७ तस्बिर, फ्रेममा अटेनन् निखिल !
फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ शोको लागि नायिका संचित लुईंटेल यतिबेला जापानमा छिन् । संचितासँगै नायक निखिल उप्रेती र निर्देशक हिमाल केसी पनि त्यतै छन् । जापानको चिसो मौसममा संचिता रमाईलो गरिरहेकी छन् । त्यहाँको हिउँदेखि सडक र रेष्टुरेन्टका तस्बिरहरु संचिताले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन् ।
तर जापान पुगेपछि संचिताले पति उप्रेतीसँगका तस्बिरहरु भने फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छैनन् । सायद निखिलले संचिताको तस्बिर खिचिदिएका हुन् । ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ नायिका सारा शिर्पाइली मुख्य नायिका भएतापनि जापानको शोमा निर्देशक, निखिल र संचिता गएका हुन् । यही जनावरी २८ तारिखमा जापानको टोकियो शहर पिंजडा ब्याक अगेनको शो हुँदैछ । हेर्नुस् संचिता ७ तस्बिरहरु :